Nepal Deep | राशिफलले बताए अनुसार शुभ कामको थालनि गर्नुहोला
राशिफलले बताए अनुसार शुभ कामको थालनि गर्नुहोला
सोमबार, साउन १९ २०७७
आज २०७७ साउन १९ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
आज सुनको मूल्य बढ्यो,तोलाको कति पुग्यो ?
आज २० अंकले बढ्यो नेप्से
कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई वालिङ नगरपालीकाको २५ हजार नगद सहयोग
अबदेखि ट्राफिक जरिवाना मेसिनबाटै तिर्न सकिने
आज नेप्से ६९ अङ्कले बढ्यो